အစဉ်အဆက်လုံခြုံရေး - အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် & Clean & Boost | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အစဉ်အဆက်လုံခြုံရေး - အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် & Clean & Boost
အစဉ်အဆက်လုံခြုံရေး - အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် & Clean & APK ကို Boost
, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသတ်တာပိုမြန်ဖုန်းကိုဖြစ်စေလျက်, နှင့် App ကိုကို standby နှင့်အတူဘက်ထရီကယ်ဖို့ဒီ app ကို Install
Antivirus နှင့် Malware နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ယခုက Android အဘို့သင့် Antivirus ကို FIREWALL ဖြစ်လျှင်ဆော! ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏လအတွင်းပြီးနောက်အမြဲလုံခြုံရေးဂုဏ်ယူစွာအမှတ်တံဆိပ်-သစ်ကို antivirus ကိုနှင့် malware ကာကွယ်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ installed apps များစကင်ဖတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်များ, အစွမ်းထက် antivirus ကိုအင်ဂျင်ကို 24 /7နှင့်အတူ malware ကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖိုင်တွေကို download လုပ်ပါ!
junk ဖိုင်ဖွသန့်ရှင်း - သိုလှောင်မှုအာကာသကယ်တင်
apps များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် optimization သန်းပေါင်းများစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှ, အမြဲလုံခြုံရေး, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်တွေရှင်းလင်း cache နဲ့ပြီးပြည့်စုံသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူအများအပြား GB အထိသိုလှောငျ (ROM ကို) အာကာသ restore လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဂီတ, chatting, ပုံများ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားဖိုင်များကိုကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်။
ဖုန်းကို Boost - 50% အားဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ဖုန်းကိုအောင်
တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါထပ်တိုးနှင့်အတူ, အန်းဒရွိုက်အဘို့ဤမြန်နှုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့် memory space ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဘက်ထရီပါဝါကိုကယ်ဖို့နောက်ခံအသုံးမပြုတဲ့ apps တွေကိုသန့်ရှင်းရေး။ ယင်း၏တိုးတက်မှု, သန့်ရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှု 50% အားဖြင့်ပိုပြီးထိရောက်မှုနှင့်တာရှည်ခံဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါထပ်တိုးဝစ်ဂျက်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ဘက်ထရီ Power Saver - 20% အားဖြင့်ဘက်ထရီကိုကယ်တင်
ဘက်ထရီချွေတာနှင့်အမျှအစဉ်အဆက်လုံခြုံရေးနာရီပေါင်းများစွာအားဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့ဘက်ထရီ-ဖျန် app များကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် hibernates ။
သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပါ - apps များအဘို့ထားသော့ခတ်
app ကိုသော့ခတ်နှင့်အတူ, သငျသညျအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးရန်သင့် apps များဖွင့်သော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ စတာတွေက Facebook, Messenger ကို, Twitter ကို Message များအတွက်ပံ့ပိုးမှုထည့်ပြီးပါပြီ။ အသုံးပြုသူများကုဒ်သော့ခတ်ခြင်းနှင့်ပုံစံသော့ခတ်အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
CPU ကို Cooler - စက္ကန့်အတွင်းကိုဆင်းအအေး
အစဉ်အဆက်လုံခြုံရေးသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကိုချအအေးထို့ကွောငျ့, device ကိုအပူချိန်နှင့် overheat ဖြစ်စေကြောင်းပေါ် မူတည်. အနီးကပ်ဘက်ထရီဖျန် app များကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါ။
အမြစ်အခမဲ့ - လုံခြုံ & အန္တရာယ်ကင်း
ဤ Android အာနိသင်တိုးမြှင့်အမြစ်အဘို့မလိုအပ်နှင့်အတူဖုန်းနှင့်သန့်ရှင်းတဲ့ Junk ဖိုင်များကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းနှင့်ဖိုင်များကိုဿုံဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။
အစဉ်အဆက်လုံခြုံရေး - အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် & Clean & Boost
antivirus Tools များ